Kushambidza tsoka – kunofuratirwa nemakereke asi kuine chirevo chakadzama
churchages.net » Shona » Zvidzidzo zveBhaibheri » Kushambidza tsoka – kunofuratirwa nemakereke asi kuine chirevo chakadzama
Kushambidza tsoka – kunofuratirwa nemakereke asi kuine chirevo chakadzama
Jesu akazivisa kushambidza tsoka pazuva rechirayiro chekupedzisira. Aida kuzivisa Petro pamusoro pechakavanzika chakadzama icho Petro aive asina mukana wekuchinzwisisa panguva iyoyo. Asi Petro aizodzidza nezvacho nguva yaizouya.
Pauro anotiudza pamusoro pechirayiro chekupedzisira, asi haana kutura pamusoro pekushambidza tsoka sezvo yaive isiri nyaya kuna Pauro. Panguva iyoyo aiziva kuti yaive pamusoro pei, uye aive atotanga kushandisa zvazvaireva.
Regai titarise kuti Jesu akatii pamusoro pekushambidza tsoka.
Johane 13:4 Akasimuka pakurayira, akabvisa nguvo dzake, akatora mucheka, akazvisunga chivuko.
5 Zvino akadira mvura mumudziyo, akatanga kushambidza tsoka dzavadzidzi vake, akadzipisika nomucheka waakanga akazvisunga nawo.
6 Akasvika kuna Simoni Petro, iye akati kwaari: Ishe imi moshambidza tsoka dzangu kanhi?
7 Jesu akapindura, akati kwaari: chandinoita hauchizivi zvino ; asi uchazvinzwisisa pashure.
Petro haana kunzwisisa. Kuita uku kwaive kusiri kwekuratidza kuzvininipisa sezvo Petro aikwanisa kunzwisisa pamusoro pekuzvininipisa. Kuita uku kwaive kusiri kwekusuka tsvina yekunze patsoka dzavo. Petro aikwanisa kunzwisisa izvi. Guruva raive rasukwa kubva patsoka dzavo vasati vapinda mumba umu, kuitira kuti mumba mugare makachena. Asi panguva iyi, chirairo chaive chapera. Vaive vapinda mumba umu vatova nenguva refu varimo. Tsoka dzavo dzaive dzasukwa kare pavaipinda mumba.
Jesu aiedza kuvanongedzerera kune imwe nyaya yaive yakadzama kwazvo zvekuti aive asingagoni kuvatsanangurira nguva iyoyo.
Asi Petro izodzidza nezvayo pamberi.
Chii chaifanira kudzidzwa naPetro?
Saka chii chaicho chaive chakarasika Petro zvakanyanya pachiri?
MaJuda ese aive akarindira Messiasi. Jesu ndiye munhu aive akakodzera kwazvo kuva Messiasi wavo. Asi basa raMessiasi, mumaziso emaJuda, raive rekudzinga maHedeni ese kana vaya vasiri maJuda munyika yeIsraeri kuti maJuda azvitonge. Samusoni aive auraya chiuru chevaFirisitia nesimba rake raibva kuna Mwari. Gidioni aive aparadza hondo yevaMediani iye ari nevanhu mazana matatu chete. Mosesi aive aparadza vaEgipita nesimba ravo guru remazuva iwayo achingoshandisa tsvimbo yake yehufudzi yakaunza hosha gumi uye kumupa simba pamusoro peGungwa Dzvuku. Saka vadzidzi vechiJuda vaida kwazvo kuona kuti Messiasi aizoshanda zvakadii pakuparadza varwi vechiHedeni veRoma.
MaJuda aida kuona vaHedeni vechiRoma vachiparadzwa, uye kwosara maJuda chaiwo vaigara muIsraeri serudzi rumwechete rwaizobatira Mwari.
Kuedza kutsanangurira vadzidzi vechiJuda zuva iroro kuti vaizofanira kutora Evangeri kuriendesa kuvaHedeni zvaisazogoneka. VaHedeni vaionekwa sevavengi. Munjere dzavo pachokwadi Messiasi aizouya kuzobvisa vaRoma vese.
Petro zvakare aisakwanisawo kunzwisisa kiyi yeEvangeri, yaive kufa, kuvigwa nekumuka kubva kuvakafa kwaJesu. Vadzidzi vakatiza pakasungwa Jesu. Johane ega ndiye akauya kumuchinjikwa. Vamwe vadzidzi vese vaive nechokwadi chekuti kufa kwake kwaizova kuperawo kwehushumiri hwake hwaishamisa kwazvo.
VaHedeni vekuRoma vakauraya Jesu. Izvi zvakaita kuti maHedeni, kunyanya maRoma, vave vavengi vakuru.
Petro aive asinawo ruzivo pamusoro perubapatidzo rweMweya Mutsvene nesimba, neruzivo uye simba raizofemerwa neMweya Mutsvene mukereke yekutanga. Petro aive asina ruzivo kuti Mweya Mutsvene waizoshandura zvakadii mafungiro evanhu. Kuti magwara aive akavanda muimba yemukati vaizova nehushingi hwekufamba neEvangeri zvakasimba mumigwagwa.
Asi chidzidzo chikuru chaifanira kudzidzwa naPetro chaive chekuti Mwari aive atanga kufuratira maJuda achitarisana nevaHedeni.
Kuchidzidzo ichocho, Mwari aizoshandisa Kornerio muHedeni, uye Jesu aizobvunza Petro mibvunzo mitatu paaizomuka kubva kuvakafa. Tichadzoka pana izvozvo.
Johane 13:8 Petro akati kwaari: hamungatongoshambidzi tsoka dzangu nokusingaperi. Jesu akamupindira, akati: Kana ndisingakushambidzi, haunemugove nini.
Saka kushambidza tsoka kunoyanana neruponeso uye basa rehuvangeri. Vanhu havagoni kuponeswa kunze kwekuti vavangeri nemamishinari vabuda kunotendeutsa vanhu. Kuti muve chikamu chemuviri waJesu (kereke yechokwadi) munofanira kugamuchira Jesu seMuponesi wayo. Zvino rubapatidzo rweMeya Mutsvene runogonesa Jesu kutonga hupenyu hwedu.
Paive nezvakawanda zvavaida kudzidziswa naJesu. Asi aimirira kuti vatange vazadzwa neMweya Mutsvene.
Johane 16:12 Ndine zvizhinji zvandinoda kukuudzai, asi hamugoni kuzvigamuchira zvino.
13 Asi kana asvika, Iye Mweya wazvokwadi, uchakutungamirirai muzvokwadi yose:
Mweya Mutsvene chete ndiwo unogona kuita kuti tigone kunzwisisa Shoko raMwari.
VAEFESO 5:25 Imi varume , idai vakadzi venyu, Kristu sezvaakada vo kereke, akazvipa nokuda kwayo.
26 Kuti aiite tsvene, achiinatsa nokushambidza kwemvura pashoko.
Shoko raMwari rinotiudza zvatinofanira kuita nezvatisingafaniri kuita. Saka Shoko rinotinatsa sezvo rinogeza zvese zvakaipa zvatinoita uye zvatinofunga. Kurarama hupenyu hutsvene hunobva muMagwaro kunotiita kuti tive vakachena.
Johane 13:9 Simoni Petro akati kwaari: dzirege kuva tsoka dzangu dzoga, asi mavoko angu nemusoro wangu vo.
Kana Shoko richitinatsa Petro aidawo kuti Musoro wake (panobva ndangariro dzake) nemavoko ake (panobva mabasa ake) kuti zvinatswe vo. Izvi zvinonzwisisika kana Petro aizvifungira iye. Asi Jesu aive asina kutarisana nezvaidiwa naPetro uye zvido zvake. Jesu aive nechiratidzo chikuru mundangariro dzake.
10 Jesu akati kwaari: wakashambidzwa muviri wose, unofanira kwoga kuti ashambidzwe tsoka dzake, zvino wanaka kwazvo, imi makanaka asi hamuzi mose.
Kusuka kwemvura dzeShoko kunoshanda kutsoka chete, kwete mumwe muviri wose.
Izvi zvinoreva kuti zvaifungwa naJesu zvaive zvisina chekuita naPetro pachake. Kana tsoka dzaPetro dzega dzakanatswa zvino mumwe muviri wake wose waizova usina kunatswa . Jesu airangarira pamusoro pechimwe chinhu chakadzama kwazvo.
Izvi zvinotsigirwa nekutaura kwake, kwekuti havasi vese vadzidzi vaive vakachena kana kunatswa. Aireva Judasi nechivi chake chaaizoita chekumutengesa chaaive atokurukurirana nevaKuru vechiJuda. Saka kunatsa kwemvura kwaive kusingarevi kusukwa kwetsvina kubva patsoka dzaPetro. Kusukwa kwezvivi zverudzi rwevanhu kusina kunzwisiswa naPetro ipapo, asi Petro aizokuzivisa kumaJuda pazuva rePentecositi.
39 Nokuti chipikirwa ndechenyu, navana venyu, navose vari kure vanozodanwa naShe, Mwari wedu.
Titendevuke kuzvivi zvedu. Tibapatidzwe muZita raJesu Kristu. Nenzira iyoyo tinotora Zita raMwari remunhu, nenzira imwe iyo mukadzi anotora zita remurume wake.
“Navose vari kure”: kutaura uku, kwakataurwa kubva pakurudziro yeMweya Mutsvene, hakuna kuburitsa kuti sungano iyi yaive yemaJuda chete. Izvi zvaizosanganisira vaHedeni vaigara kure pasi panyika, uye maHedeni vaizova kure mukati menguva mumakore 2000 aizouya enhorondo yekereke.
How was Peter to grasp that this great salvation message was to also go to the Gentiles? Petro aizozvitora sei kuti ruponeso urwu rwaizoendawo kuvaHedeni?
Mumashure mekumuka kwake kubva kuvakafa, Jesu akataura naPetro katatu. Kudzokorora kusingajairiki.
Johane 21:15 Zvino vakati vasvusvura; Jesu akati kuna Simoni Petro: Simoni Mwanakomana waJona, unorudo neni kupfuvura ava vose here? Akati kwaari; Hon’o Ishe; munoziva kuti ndinokudai. Jesu akati kwaari: Fudza makwaiana angu.
16 Akati kwaari zve rwechipiri: Simoni mwanakomana waJona; unorudo neni here? Akati kwaari: Hon’o Ishe; munoziva kuti ndinokudai. Jesu akati kwaari: chengeta makwai angu.
17 Akati kwaari rwechitatu; Simoni mwanakomana waJona: unondida here? Petro akarwadziwa moyo, nokuti wakati kwaari rwechitatu; unondida here? Akati kwaari: Ishe munoziva zvose; munoziva kuti ndinokudai. Jesu akati kwaari: Fudza makwai angu.
Mwari anoona rudzi rwevanhu rwakapatsanurwa mumapoka matatu. MaJuda, vaSamaria (chikamu maJuda chikamu vaHedeni), nevaHedeni marudzi asiri vaJuda.
Petro akaudzwa kuti afudze makwai katatu. Zvainzwisisika kumaJuda nevaSamaria, sezvo vaive mapoka maviri akashandwa nawo naJesu. Asi nei Jesu akadzokorora katatu?
Petro aizofanira kurangarira zvaive zvambotaurwa naJesu.
Johane 10:16 Namamwe makwai ndinawo asati ari edenga rino. Naiwo ndinofanira kuvuya nawo vo, achanzwa inzwi rangu; richava boka rimwe, nomufudzi mumwe.
Jesu akashanda nemaJuda nevaSamaria paaive panyika. Kana kwaive nemamwe makwai zvakare, aifanira kuva aireva maHedeni. MaHedeni! Hakuna muJuda akakwana aida kuzvisanganisa nemaHedeni. Petro aizoda kurudziro huru kuti aende neEvangeri kuvaHedeni.
Saka Mwari akaita Kornerio, Muhedeni wechiRoma, kuti atumire vanhu vatatu kuti anokumbira Petro kuti auye kumba kwake kuJopa, nzvimbo iri pakati pemiganhu yenyika yeJudea neSamaria. (maJuda vaSamaria nevaHedeni vose vaisangana muguta iri.)
Vanhu ava pavaifamba vachiuya, Petro akaona chiratidzo katatu, chaitaura pamusoro pekuti asadaidze chero mhuka kuti yakasviba.
Mabasa 10:9 Zvino fume mangwana vachiri parwendo, vava pedyo neguta, Petro akakwira pamusoro peimba kundonyengetera nenguva inenge yechitanhatu.
10 Akaziya kwazvo, akada kudya, zvino vakati vachagadzira, akabatwa mweya;
11 Akavona denga razarurwa nechimwe chinhu chichiburuka somucheka mukuru unoburusirwa pasi wakasungwa miromo mina.
12 Maive nomhuka dzose dzinamakumbo mana, nezvinokambaira zvenyika, neshiri dzedenga.
13 Inzwi rikavuya kwaari, richiti: Simuka Petro baya udye.
14 Asi Petro akati: Kwete, Ishe, nokuti handina kutongodya chinhu chisakanaka, chinetsvina.
15 Ipapo Inzwi rikavuya zve kwaari, rwechipiri, richiti: Chakanatswa naMwari usati chine tsvina iwe.
16 Izvozvo zvikaitwa katatu, chinhu chikakwidzwa pakarepo kudenga.
17 Zvino Petro wakati achakanganiswa mumwoyo make, kuti chiratidzo chaakanga avona chairevei, varume vakanga vatumwa naKornereo, vamira pasuvo vachibvunza imba yaSimoni.
Petro akaenda kumba kwaKornerio muHedeni aive paJopa, Petro akataura naKornereo.
Mabasa 10:28 Akati kwavari: imi munoziva kuti hazvina kufanira kuti muJuda afambidzane nomunhu worumwe rudzi, kana kuvuya kwaari. Asi Mwari wakandiratidza, kuti ndirege kuti munhu haana kunaka, kana kuti unetsvina.
Petro aive adzidza chidzidzo chakadzama. MaHedeni vasingatendi vaisafanira kusarudzwa, vaifanira kuunzwa kuna Kristu.
Petro akaparidzira mhuri yevaHedeni neshamwari dzaKornerio.
Mweya Mutsvene wakabva waburukira pana Kornerio nevaHedeni vose vaive mumba make.
Mabasa 9:31 Zvino kereke yakanga inorugare paJudea rose, neGareria, neSamaria ikasimbiswa; ikawedzerwa ichifamba ichitya Ishe, ichinyaradzwa noMweya Mutsvene.
32 Zvino Petro wakati achipote-nyika kwose, akaburukira vo kuvatsvene vakanga vagere Rida.
Petro akapfuura nekuGareria rose, Samaria neJudea achizoguma ava Rida asati aenda kuJopa.
Jopa yaive nzvimbo yezambuko yaive yerudzi rwaDani, pamiganhu iri pakati peJudea neSamaria.
MuJopa, Petro akamutsa Doka, mukadzi wechidiki, kubva kuvakafa. Aive chiratidzo chekereke yeTestamente Itsva yaizorarama munaKristu.
Zvino Petro akazoparidzira Kornerio muHedeni.
Saka Petro aive aparidza Evangeri semuredzi, anodhonzera mambure ane vose maJuda, vaSamaria nevaHedeni kunyika.
Zvino Pauro, mukaki wematente, akatora nzvimbo iyi apo nehunyanzvi hukuru akasonanidza pamwechete Testamente Yekare neTestamente Itsva, achibatanidza Murairo neNyasha zvinodakadza.
Pauro aive mupostora kuvaHedeni. Akatanga rwendo rwemamishinari rwaizoparidza Evangeri kure kure. Kereke yevaHedeni yaive yaitirwa nheyo dzayo munguva yekereke yekutanga.
Saka izvi zvaive nechii chekuita nekushambidzwa kwetsoka?
Pfungwa mbiri idzi dzakabatanidzwa muhope dzaNebukadnezari dzaive pamusoro pemufananidzo wemuHedeni, sekutsanangurwa kwazvakaitwa muchitsauko 2 chaDanieri.
Musoro wendarama waive Babironi – yakaparadzwa makore akapoteredza 536 BC nemaMediani nevaPersia.
Chipfuva nemavoko vaive maMediani nevaPersia vakaparadzwa naAlexander the Great (dumbu nezvidzva ) makore akapoteredza 330 BC.
Makumbo edare aive hushe hweRoma hwakapambwa naJurio Kesari paakayambuka rwizi rweRubiko muna 49 BC.
Zvidimbu zvedare mutsoka zvaimiririra kusimuka kwekereke yeRoman Catholic pakaparara hushe hwenyika yeRoma. Kereke yakabva yanhonga nhonga simba raive rarasika muhushe hweRoma.
Saka Petro akakumbira kuti musoro wake nemavoko ake ashambidzwe, Jesu akaramba nekuti izvi zvaizoreva kuti hushe hweBabironi hwakare nehushe hwekare hweBabironi, maMediani uye vaPersia zvaizotendeutswa neEvangeri. Izvi zvaisagoneka nekuti vanhu ava vaive vafa kare.
Ruponeso munguva dzeTestamente yekare idzi rwaive rushinda rutsvuku rwaibva muhushe hwemaHedeni apo Mwari aiponesa maJuda chete kupfurikidza kunamata kwavo muTembere, uye chero vaHedeni vaitendeukira kunotenda muchiJuda.
Asi zvinhu zvaizoshanduka paCalvari.
Ruponeso rwaizoyambukira kubva kumaJuda, vakaramba Jesu, ruchienda kuvaHedeni.
Jakobo paakaropafadza vanakomana vaJosefa vaviri, akapesanisa mavoko ake kuita chipiyaniso makomborero akaenda kumwanakomana muduku Efraimi.
Genesisi 48:13 Josefa akavabata vari vaviri, Efraimi norudyi rwake, kuruboshwe rwaIsraeri, Manase kuruboshwe rwake kurudyi rwaIsraeri, akavaswededza pedyo naye.
14 Israeri akatambanudza ruvoko rwake rworudyi, akaruisa pamusoro waEfraimi, waiva muduku, noruvoko rwake rworuboshwe pamusoro waManase, wakapesanisa mavoko ake achizviziva, nokuti Manase wakanga ari wedangwe.
Izvi zvaive mucherechedzo wekuti pamuchinjikwa makomborero aizobva kumaJuda, rudzi rwaMwari rwedangwe, achienda kuboka duku raizova kereke yevaHedeni.
Saka rushinda rutsvuku rweruponeso rwaizopinda mumufananidzo wemuHedeni pachitsitsinho chetsoka rwofamba nemutsoka kuenda kuzvigunwe.
Saka chitsitsinho chetsoka chaimiririra nzvimbo yakakosha pamufananidzo wemuHedeni.
Murwi mukuru wechiGiriki Achille akauraiwa nemuseve wakabaya chitsitsinho chetsoka yake. ndiwo maonero edu “echitsitsinho chaAchille” enzvimbo yekushaiwa simba maari. Saka Mwari pachake akava munhu kuti ave chitsitsinho chemufananidzo wemuHedeni. Chitsitsinho chetsoka, chinomiririra rufu rwaKristu pamuchinjikwa, rwakazova simba rekereke yevaHedeni pachinzvimbo chekuti rufu ruve kushaiwa simba.
Chiprofita chekutanga muBhaibheri chaitaura kuti musoro wevana vechikara chakashadurwa kuita nyoka muEdeni waizopwanyiwa nechitsitsinho chemwana wemukadzi aive Kristu. Munhurume ega ndiye ane mbeu inobereka mwana, kwete mukadzi. Asi Jesu akapiwa kuchibereko chaMaria neMweya Mutsvene, pasina munhu wenyama aive achishandiswa po. Saka Jesu aive mwana wake. Hakuna murume panyika aikwanisa kumuti aive mwana wake. Mweya Mutsvene ndiwo waive baba vaJesu.
Mateo 1:18 Kuberekwa kwaJesu Kristu kwaive kudai: Maria, mai vake, wakati anyengwa naJosefa, vasati vasongana, wakavonekwa ava nemimba noMweya Mutsvene.
Genesisi 3:15 Ndichaisa ruvengo pakati pako nomukadzi, napakati porudzi rwako norudzi rwake; irwo rwuchapwanya musoro wako, newe uchapwanya chitsitsinho charwo.
Chitsitsinho chakapwanyiwa ironda renguva pfupi. Munhu anenge atora ronda iroro haangafambi kwemazuva mashoma.
Saka muviri waJesu wakavata mubwiro kusvikira paakamuka musi weSvondo mangwanani, akafamba panyika zvakare.
Asi musoro wakapwanyiwa kunenge kuri kukuvara kukuru. Tsinga dzeropa mumusoro dzinodambuka ropa rodunduvara pakati pedehenya nenjere. Zvino ropa iri rinosvika mumasero enjere, rinobva raparadza masero enjere zvinozopedzisira zvauraya chisikwa chipenyu ichocho.
Saka Satani, akamiririrwa nechikara chakazoshandurwa kuitwa nyoka muEdeni akatongerwa rufu paCalvari. Kuita kwemusoro wakapwanyiwa netsinga dzeropa dzakaputika zvinoreva kuti nzvimbo iri pakati pedehenya nenjere iri kuita dziva reropa riri kukura richapedzisira rasairira masero enjere rouraya matishu enjere. Rufu urwu runokwanisa kutora nguva refu kuti ruitike, asi haruzodzoreki. Satani akatongerwa rufu.
Pachitsitsinho chetsoka, kushaiwa simba kwakaonekwa panaKristu pamuchinjikwa, Satani akawana ronda rake raasingazopori kwariri.
Pakupedzisira tinoona ivhu rakanyorova mutsoka dzemufananidzo wemuHedeni.
Dare harigoni kupa hupenyu. Chikamu chimwechete chemufananidzo wemuHedeni chinokura mbeu yehupenyu ivhu. Saka ivhu rinomiririra Mwenga waKristu, kereke yechokwadi.
Ivhu rakasanganiswa ivhu rakanyorova. Mwenga waKristu akashambidzwa mumvura dzeShoko mukati memakore 2000 enhorondo yekereke.
Ndizvo zvimwe zvinomiririrwa nekushambidzwa kwetsoka.
Ivhu rakanyorova uye rakaneta, asi rinogona kuumbwa kuita chimwe chinhu. Uye rinokwaisa kukurisa chinhu chinorarama.
Mapisarema 119:105 Shoko renyu ndiwo Mwenje wetsoka dzangu, nechiedza panzira yangu.
Isaya 52:7 Dzakanaka sei pamusoro pamakomo tsoka dzounovuya namashoko akanaka, unoparidza rugare, unovuya namashoko akanaka ezvinhu zvakanaka, unoparidza ruponeso unoti kuZioni: Mwari wako unobata vushe!
VAROMA 10:15 Vachaparidza seiko, kana vasingatumwi? Sezvazvakanyorwa, zvichinzi: dzakanaka sei tsoka dzavanovuya namashoko omufaro ezvinhu zvakanaka!
VAEFESO 6:15 Makasunga patsoka dzenyu, kugadzirwa kweEvangeri yorugare.
VaVangeri nemamishinari ndivo tsoka dzekereke dzinotakura Evangeri kuendesa kumaHedeni.
Saka zaruriro yeMagwaro yakatungamirira vatendi vechokwadi mukati mekushanduka kwemamiriro ezvinhu enguva nomwe dzemakereke. MaKristu akatsvaga mukati menguva dzemakereke kuti atendeutse vanhu vauye kuna Kristu. Muvengi mumwe anozivikanwa mukati menguva nomwe dzese dzekereke ndiyo kereke yeRoman Catholic nechimiro chesangano racho chisiri muMagwaro. Vaviri ava, Mwenga waKristu nechiRoman Catholic, hazvisangani. Makumi emamiriyoni emaKristu akafa achipikisana nechitendero cheRoman Catholic.
Johane Mubapatidzi akataura pamusoro peshangu dzaJesu.
MABASA 13:25 Zvino Johane wakati opedzisa basa rake, akati: munoti , ndini aniko? Handizi iye. Asi tarirai shure kwangu mumwe unovuya, wandisakafanira kuti ndisunungure shangu dzetsoka dzake.
Johane Mubapatidzi akataura kuti aive asina kufanira kubvisa shangu dzaJesu.
Marko 1:7 Akaparidza achiti: Shure kwangu kunovuya mumwe unesimba kupfuvureni, wandisino-kufanira kukotama kuti ndisunungure rukanda rweshangu dzake.
Johane Mubapatidzi akawedzera kuti haaigona kusunungura rukanda rweshangu dzaJesu.
Chokwadi. Izvi zvaimiririra kuzvideredza kwake kukuru pahuvepo hwaJesu. Asi zvairevawo chimwe chinhu chakadzama.
Johane Mubapatidzi akaprofitwa kuti aizouya mumweya wemuprofita Eria.
Maraki 4:5 Tarira, ndichakutumirai muprofita Eria, zuva iro guru raJEHOVA, rinotyisa, risati rasvika.
6 Iye uchadzorera mwoyo yamadzibaba kuvana, nemwoyo yevana kunamadzibaba avo, kuti ndirege kuvuya ndirove nyika nokutsamwa.
Asi aizoita hushumiri huviri. Kudzorera madzibaba kuvana nekupesana zvakare kunova kudzorera vana kumadzibaba avo.
Izvi hazvigoneki kumunhu mumwechete. Mwari anotendeutsira zvakaipa kune zvakanaka, kwete rumwe rutivi.
Saka Johane Mubapatidzi aikwanisa kuita hafu yekutanga chete. Mutumwa akati pamusoro pake
Ruka 1:17 Uchafamba pamberi pake noMweya nesimba raEria, kuti adzorere mwoyo yamadzibaba kuvana, navasingateereri kuvuchenjeri bwavakarurama, agadzirire Ishe vanhu vakamugadzirirwa kwazvo.
Johane akatendeutsira madzibaba echiJuda, vaive muhuranda kuMurairo, kumharidzo yevarume vechidiki Jesu nevadzidzi vake vechidiki. Madzibaba echiJuda aive akura netsika dzavo dzezvitendero vaive vakura pakusateerera Shoko raMwari. Vaive vakavenga chero kuponeswa kwemunhu musi weMugovera, kana kuti vanhu vanokohwa koroni kubva padavi rayo vachiidya vasina kushambidza mavoko avo. Vaivenga kugamuchirwa kwaJesu nevanhuwo zvavo muguta. Asi Jesu aive neruzivo rwechokwadi rweShoko raMwari sezvo aiziva kuti aizofira zvivi zvedu zvichibva pane zvaive zvakaprofitwa kare. Vadzidzi vaJesu vechidiki vaizoparidza Evangeri iri iye akwira kuDenga.
Vadzidzi vakazokura vakanyora Testamente Itsva. Mukuita izvi vakava madzibaba emweya enguva yekereke yekutanga.
Makore anoda kuita 2000 aizodarika. Chokwadi chekereke yekutanga chaizorasika muNguva yeRima. Muna 1520 Martin Luther kuGermany akadzosa pfungwa yekuponeswa nenyasha kupfurikidza kutenda, kwete nemabasa. Makore akapoteredza 1750 John Wesley kuEngland akadzosa hutsvene nekufamba vachiparidzira zvakazobereka nguva yemamishinari yakatanga gore 1800 risati rasvika. Muna 1904 kwakaitwa vhuserere yeWelsh uye muna 1906 vhuserere yemumugwagwa weAzusa kuLos Angeles, kuAmerica, kukadzorera simba rerubapatidzo rweMweya Mutsvene. Chinhu chimwechete ndicho chaive chasara, kutidzorera kuzaruriro yezvakavanzika zvakambotendwa mazviri nekereke yekutanga.
Mateo 17:11 Akapindura (Jesu) akati: Eria uchavuya hake, avandudze zvinhu zvose.
Izvi zviri muzvinhu zvaizouya. “Eria uchavuya hake”. Johane Mubapatidzi aive atodarika. Hushumiri hwake hwaive hwadarika. Johane Mubapatidzi haana kuvandudza chero chinhu. Akazivisa rubapatidzo rwemvura rwaive rutsva kwavari. Akazivisa Messiasi aive asina kumboitwa nemaJuda. Johane aive asina hushumiri hwekuvandudza kana kudzorera zvinhu pazvaive.
Johane Mubapatidzi akatanga Evangeri. Haana kudzorera Evangeri.
Marko 1:1 Kutanga kweEvangeri yaJesu Kristu, Mwanakomana waMwari;
2 Sezvazvakanyorwa mumuprofita Isaya, zvichinzi: Tarirai ndinotuma munyai wangu pamberi pako, uchakunatsira nzira yako.
3 Inzwi rounodana murenje, Gadzirirai nzira yaShe, Ruramisai migwagwa yake.
4 Johane wakavuya achibapatidza murenje, achiparidza rubapatidzo rwokutendevuka vakanganwirwe zvivi.
Jesu nevadzidzi vake vaizokudza Evangeri kusvika pakuzadziswa kwaro muTestamente Itsva.
Evangeri iri raizorasika muNguva yeRima. Zvino Rumutsiridzo rwaLuther uye kudururwa kwemweya unoshamisa kubva kudenga panguva yaWesley zvakaitika pakati pevePentecosti zvaizotanga kutidzorera kukereke yekutanga. Asi zaruriro yezvakavanzika zveMagwaro zvaizivikanwa naPauro nekereke yekutanga zvaizoramba zvakavanzwa kubva paruzivo rwekereke yenguva iyoyo.
Eria aizodiwa kudzorera chokwadi ichi.
Zvisimbiso zvinomwe muBhuku raZvakazarurwa zvaive zvakasimbisa zvakavanzika zveBhaibheri. Zvaizoda hushumiri hwakasarudzika kuti husunungure zvakavanzika zvinomwe izvi.
Musi wa 28 Kukadzi 1963 Gore rinoshamisa (negore rakakonzereswa nemamiriro ezvinhu panyika roketi rakaputika raive mamaira 20 kumashure kwaro) rakafamba kubva kumadokero kuenda kumabvazuva pamusoro peguta reFlagstaff muArizona pachinhambwe chemakoromita 43 mudenga. Ichi chaive chiratidzo cheMwanakomana weMunhu kudenga.
Mateo 24:30 Ipapo chiratidzo choMwanakomana womunhu chichavonekwa kudenga:
Gore rinoshamisa rakaitwa nemapapiro evatumwa. Hakuna gore remamiriro ekunze rinoitikira pachinhambwe chemakiromita 43 mudenga.
Joere 2:30 Ndicharatidza zvishamiso kudenga napanyika, zvinoti: Ropa nomoto neshongwe dzovutsi.
Gore rechipiri rakauya kumashure kweGore rekutanga raive chiratidzo chezvesainzi. Raive miziri rakasanganiswa reThor rine kuwedzerwa kwesimba kwemafuta akasanganiswa. Rakasimudzwa nekukasika mumashure mekuteewa kwaro kubva pabhesi remasoja reVandenberg, rikaputitswa nemavune pachinhammbe chemakiromita makumi mana nematatu. Matangi aro emafuta aive achiri akazara parakaputitswa. Kuwedzera ipapo chinhu chekuwedzera simba chakaputika saka pakaitika chiutsi chakanyanyisa chakaita shongwe mbiri dzevutsi dzakanogadzira gore muchadenga. Gore iri rakafamba richibva kumadokero richienda kumabvazuva muchadenga nemhepo yaive yakanyanya kusvikira rasvikawo pamusoro peFlagstaff.
Mwari aida kuti vanhu vatarisane neArizona.
Mwari paaida kuti Mosesi atungamirire eksodo yekutanga yemaJuda kubva muEgipita, akapa chiratidzo chekukwezva meso ake chaisanganisira gwenzi remuti richitsva nemoto unoshamisa usina kuriparadza.
Saka Mwari paaive akuda munhu wekutungamirira eksodo yetatu nekuunza Mwenga weMagwaro kubva mukereke akashandisa chiratidzo chemuchadenga chegore rakaitwa nechiutsi chenyika ino pamwechete nerimwe Gore guru rinoshamisa rakaitwa nesimba raMwari.
Mazuva masere akazotevera vatumwa vanomwe vakashanyira William Branham aivhima pedyo nemakomo eSunset Peak mamaira anoda kusvika 200 kumusoro kweFlagstaff. Vakamupa basa rekuzarura Zvisimbiso zvinomwe. Munguva yaida kukwana vhiki rimwe, mutumwa mumwe nemumwe akazivisa chakavanzika chechisimbiso chimwe nechimwe. Akapakata kunzwisisa uku, hama Branham akagona kutidzidzisa kuti tingayananise sei Magwaro akasiyana siyana pamwechete kuti tibude nenzira kana dzidziso imwe inotsigirwa neBhaibheri kubva kuna Genesisi kusvika kuna Zvakazarurwa. Kekutanga kubva munguva yekereke yekutanga, maKristu vakatanga kugona kunzwisisa zvakavanzika zvakakosha zveBhaibheri.
Zvakazarurwa 10:7 Asi namzuva enzwi romutumwa wechinomwe, kana vodo-kuridza, zvakavanzika zvaMwari zvichapedziswa, sezvaakaparidzira varanda vake, ivo vaprofita.
Nekutora zvakataurwa nehama Branham tichizvidzosera kuMagwaro tichinowana musoro wenyaya inozotsanangurwa muBhaibheri rese, tinofanira kugona kuziva nekunzwisisa zvakavanzika zveBhaibheri. Semuenzaniso,
Nei Jesu akanyora kaviri nemumwe wake muvhu vanhu pavaida kutaka mukadzi mutadzi nemabwe?
Nei Mateo naMarko vakataura pamusoro pemutumwa mumwechete paguva raJesu, asi Ruka naJohane vakataura kuti vaive vaviri. Chii chavaiedza kutiudza?
Kuna Marko 8:21 Jesu aida kuti vadzidzi vanzwisise kuti nei kwaive nematengu manomwe nematengu gumi nemaviri emafufu ezvakasaririra paakapa vazhinji zvekudya.
Nei Mateo naRuka vaine tsananguro dzedzinza raJesu dzakasiyana kubva kuna Davidi kuenda kuna Josefa pavaironda dzinza reropa raJesu. Mateo ane madzitateguru mashoma ne13 kana zvichienzaniswa naRuka.
Izvi zvishoma zvezvinhu zvinokandirwa nevasingatendi kumaKristu, vosekerera apo maKristu anodzokera shure nekusaziva kwavo Bhaibheri uye kusaziva kwavo zvakavanzika izvi.
Nekumhanyisana nezvakataurwa, vaparidzi vemharidzo havachagoni kutsanangura zvakavanzika izvi.
Asi hama Branham vakazivisa Zvisimbiso zvinomwe – vakazivisa kuti chisimbiso chechinomwe ndicho chakavanzika chakazara, chinoyanana neKuuya kwaShe – asi zvakavanzika zvezvakanyorwa muBhaibheri zvinokwanisa kuziviswa.
Semaitirwo ezvinhu akaringana: kuti mushambidze tsoka munofanira kutanga mabvisa shangu dzenyu.
Tsoka dzemunhu ndicho chakavanzika chakavanzwa nekuti dzakavharirwa mushangu dzake. Kubvisa shangu munofanira kutanga masunungura rukanda rwadzo. VePentecosti havana kugona kusunungura rukanda saka pavaiedza vari parukanda rwakasungwa, chavaigona kuona chete pasi perukanda rwaive rurimi rweshangu. Saka vakabva vasimbirira pandimi sechapupu chekuvapo kweMweya Musvene. Ndipo pavaigona kugumira kuona nekuedza kwavo kwese asi shangu ichiramba yakasungwa.
Ndicho chikonzero nei Johane Mubapatidzi akataura kuti haana kufanira kusunungura rukanda rweshangu dzaJesu Kristu. Chekutanga Pauro nemaprofita vaifanira kunyora Testamente Itsva. Chokwadi chaizorasika muNguva yeRima. Zvese izvi zvaive zvisina chekuita nehushumiri hwaJohane.
Zvino umwe Eria, William Branham, aizodiwa kuti asunungure rukanda rweZvisimbiso zvinomwe. Ipapo chete ndipo paizogona kubviswa shangu kubva mutsoka uye nhorondo yemakereke emaHedeni kubva kunguva yekereke yekutanga kusvika kune yekupedzisira yaizoziviswa apo Mwari anoshandisa Shoko rake kutungamirira nekushambidza uye kunatsa kereke yake munguva dzakasiyana dzemakereke.
Hakuna chakaipa pakuva nendimi sechipo chinobva kuna Mwari. Asi hadzisi idzo vimbiso yakapihwa kereke yekupedzisira naMwari.
Kana tikanzwisisa zvataiedza kuudzwa nehama Branham, ipapo tinozogona kushandisa zvaakataura kuturikira zvakavanzika zveBhaibheri togadzirira Kuuya kwaShe kwechipiri. Tinofanira kutsigira neMagwaro zaruriro dzese dzaakaparidza. Tinofanira kuratidza kuti zvaakaparidza zvaive zvichibva muMagwaro.
Kana tikatarisana nezvaakataura chete uye kuturikira kwedu zvaakataura izvozvo, sekutaura kwevaparidzi vemharidzo kwekuti Hillary aizokunda pasarudzo dzemutungamiri wenyika yeAmerica muna 2016, ipapo tinenge tapesana nechikonzero chakavingwa nehama Branham. Tinenge tangovaka rimwe sangano. Apa kune mamwe masangano akasiyana-siyana kare anosvika 45000, ese haazivi Bhaibheri muzvikamu zvekunzwisisa zvakavanzika zveMagwaro.
Makereke matanhatu kuna Zvakazarurwa aive nemazita awo aaidaidzwa pamaguta sezvaari. Pegamosi ndiyo yega yaive yakasiyana. Izita rechiGiriki. Zita chairo reguta rainzi Pergamamu. Nei paine musiyano uyu? Mwari aiedza kutiudza kuti kudii? Kana mukati hazvina kukosha munenge muchingovanza kusaziva kwenyu. Ipapo kwamuri, mutumwa wechinomwe anenge asati auya nekuti hamusati makuziva kuturikira Bhaibheri muchishandisa Bhaibheri.
Johane akati Jesu paakafamba pamusoro pemvura akanopinda mugwa, pakarepo vakasvika kunyika.
Asi Mateo akaisa zviitiko izvi pakati pegungwa. Jesu akapinda mugwa vakaramba vachienderera mberi nerwendo kuenda kumahombekombe. Gungwa reGareria rine makiromita 21 pakureba nemakiromita 13 pahupamhi. Kana vaive vava pakati nepakati, paive pachiri nedamba refu rekutyaira .
Mateo 14:24 Asi igwa zvino rakanga rava pakati pegungwa, richitambudzika namafungu; nekuti mhepo yakanga ichivadzivisa.
Jesu akafamba pamusoro pemvura akapinda mugwa.
Mateo 14:34 Vakati vayambukira mhiri, vakasvika panyika yeGenesarati.
Mateo akataura kuti vaive vachiri nerwendo rweimwe hafu kuti vayambuke gungwa reGarirea. Saka Johane anotaura sei kuti pakarepo mugwa wakabva wasvika kunyika kune rumwe rutivi rwegungwa? Izvi zvinoita sezvinhu zvinorwisana. Mungapindure sei munhu anobvunza mubvunzo uyu? Kana musingagoni kudaira zvino zvakavanzika hazvisati zvaziviswa kwamuri. Saka kana muchiti munoziva zvakavanzika zvese, muri kuzvinyengera imi nevamwe vakakupoteredzai.
Mukadzi akashambidza tsoka dzaJesu nemisodzi
Mumba maSimoni muFarise, mukadzi mutadzi akashambidza tsoka dzaJesu nemisodzi yake.
Ruka 7:44 Zvino wakatendevukira kumukadzi, akati kuna Simoni; Unovona mukadzi uyu here? Ndakapinda mumba mako, ukasandipa mvura yetsoka dzangu, asi uyu wakanyorovesa tsoka dzangu nemisodzi yake, akadzipisika nevhudzi rake.
Mukadzi uyu aive mucherechedzo wekereke. Aishambidza tsoka dzaJesu nemisodzi yake achidzipisika nevhudzi rake raive rakareba. Vhudzi refu pamukadzi mucherechedzo wekuzvideredza kwake kumurume wake uye kuShoko raMwari. Mwenga waKristu anozvideredza kumurume wake Jesu, iye Shoko raMwari. Kereke, zvisinei nematambudziko ayo nekurwadziwa kwayo ichada Jesu nekuzviwisira kwaari mukati menguva nomwe dzemakereke. Zvavanotambudzika nazvo nekuda kwake, zvinomiririrwa nemisodzi yake, hazvingaenzaniswi nekurwadziwa kwavo nekuda kwezvivi zvavo uye kutenda kwavo kwaari kuti akavaregerera zvivi zvavo.
Tsoka dzaJesu dzinomiririra kuti anozofamba nepamusoro pevira renguva dzemakereke manomwe kuti agare nekereke yake nguva dzese.
Mateo 28:20 Muvadzidzise kuchengeta zvose zvandakakurairai imi; tarirai, ndinemi mazuva ose, kusvikira pakuguma kwenyika.
Jesu ega ndiye aikwanisa kuvatungamirira nekuvasimbisa kumiedzo yaive yakavamirira kumberi. Asi izvozvo zvisati zvasvika, aizofamba pamusoro pevira rinotyisa rehadesi paakafa akatora zvivi zvedu zvakaipa kuenda nazvo kuna Satani kuti anorasira zvivi zvedu panadiyaborosi. Mweya yedu inovimba nenzira yaakasarudza kufamba kuti anotidzikinura.
Tsoka dzake dzinomiririra nguva nomwe dzemakereke. Mvura dzeShoko dzinotishambidza dzichitinatsa mune chero nguva yatinenge tichirarama.
Simoni muFarise, semutungamiri wechitendero, aive asina ruzivo kuti chii chaiitika. Aive asingaiti zvekushambidza tsoka zvachose. Zvichienzaniswa Jesu aizodzidzisa mudzidzi wake Simoni Petro chidzidzo chakadzama pamusoro pekushambidza tsoka.
Saka chinhu ichi chakakura mukati mevakuru vemakereke vanoda tsika dzevanikoraiti- dzinova kupamba kana kutapa ungano. Vatungamiri vemakereke, zvisinei nekuti havana gwara rakajeka kuti zaruriro yeBhaibheri ndeyekuti kudii, vanoita kuti vanhu vese varambe vari pasi pavo. Zvino vanobva varasisa masangano avo nekuvaudza kuti hazvina kukosha kuti muzive zvakavanzika zvese zveMagwaro. Vanoona kusaziva Bhaibheri sekiyi yekugadzirira Kuuya kwaShe. Zvisinei, kusaziva Bhaibheri ikiyi yekuzarura mukova wekupinda munguva yeKutambudzika kukuru.